Kaniisada iyo Kuliyada, – Rasaasa News
Jijiga, Mar 28, 2014 – Qormada maanta oo ah qaybtii 5aad, waxay daba socotaa qormooyin xidhiidh ah oo ku saabsan diinta iyo degaanka, kuwaas oo aan ugu talo galay in aan ku baraarujino dadka.
Degaanka Somalida waxaa ka socda isbadal [transformation] iyo faragalin fog oo dhinacyo badan leh. Isbadaladan oo ay adagtahay in ay fahmaan dadka caadiga ah ayey mareen wadamo badan oo aduunka ah, kuwaas oo saamayntooda ay ka qoomameeyaan jiilasha dambe. Isbadalada ka jira degaanka waxay leeyihiin hal ujeedo, laakiin jihooyinka ay u marayso Atobiya way kala duwan yihiin sida; Diinta, Dhaqanka, Dhaqalaha iyo Isdhaxgalka bulshada oo kuligood isugu imanaya hogaan qaadasho.
Sidaan hore u qoray waxaa si hoose u siibanaysa Islaamnimada ka jirtay degaanka Somalida, taas oo ay cadayn u tahay warbaahinta degaanku.
Kaniisada Jijiga, waxay ku fadhidaa dhulka ugu balaadhan Kaniisadaha Atobiya ku yaal, taas oo dhacda jidka dheer ee isku xidha Addis Ababa iyo Godey, oo ay markiiba ishaadu qabanayso kolka aad ka timaado dhinaca Godey. Dhinaca laamiga ee darbiga Kaniisada waxaa teedsan dukaamo fara badan oo ay Kaniisadu leedahay. Marka aad gasho gudaha Kaniisada waxaad ku arkaysaa guryo badan oo la seexdo, jiko wayn oo cuntada lagu sameeyo, Iskuulo iyo goobo ay dhalinyaradu ku ciyaarto.
Miisaaniyada ay Kaniisadu hawlaheeda ku fuliso waxaa bixiya dawlada dhexe, Kaniisada sare ee Addis Ababa, Kaniisada Alexnaderia Masar iyo Kaniisada Athens Grerga, iyo waliba Moscow. Maalinta Axada Kaniisada Jijiga, waxaa ka dhaca Caabudaad balaadhan, waxaana la xidhaa jidka dheer ee xidhiidhiya magaalada iyo degaanka intiisa kale. Jidka waxaa la xidhnaa maalin walba oo Axda ah lix saacadood oo xidhiidh ah [12:30-18.30]. Tirada dadka ka qayb galaya salaada caabudka ee Kaniisada Jijga, qiyaastii waa kala badh shacabka magaalada ku nool, intooda badana waxay ku hadlayaan Af Somali.
Jaamacada Jijiga, waxay socod gaaban u jirtaa Kaniisada dhinaca qoraxa ka soo baxa ee dhinaca Gidhibka, mana muuqdo dhismaha Jaamcadu ilaa aad magaalada ka baxdo. Jamacada Jijiga waxay jirtaa mudo lix sano ah, waxaana dhigta 2,000 oo Arday. Tirada ardayda Somalida ah ee dhigataa waa 600 oo arday [dds, Puntland iyo Somaliland], ardayda kale waxay ka yimaadeen Atobiya.
Jaamacdu waxay leedahay hoy iyo cunto, waxaa kale oo ku yaal Bangi ay ardayda qaarkeed lacago ka qaataan. Ardayda Somalida ah ku arki maysida iyaga oo Bangiga lacag ka qaadanaya. Maamulka Jaamcada iyo waxbarashadaba waxaa gacanta ku haya dad ka yimid Atobiyada sare, laakiin jilayaashu waa dad Somali ah. Kolka aad Jaamacada gudhaeeda joogtid dhagahaagu ma maqlayaan eray Af Somali ah.
Xidhiidhka Jaamacada iyo Kaniisada, Ardayda Jaamcada dhigata badankeeda iyo qaar macalimiinta ka tirsan waxay seexdaan Kaniisada, aroortiina waxbarashada ayey ka soo aadaan. Labada nisba waxaad arkaysaa qul qulka Ardayda oo is qabsada inta u dhaxaysa Jamacada iyo Kaniisada. Ardaydu waxay xidhiidh waxbarasho iyo mid saaxiibtinimo la wadaagaan dhalinyarada magaalada Jijiga, kuligoodna way jajabsadaan afka Somaliga. Waxaa kale oo magaalada dhexgalkeeda kacan ku siiyo dadka Masiixiga ee degan magaalada, kuwaas oo xidhiidh dhaw ay leeyihiin bulshada magaalada, maadaama ayna jirin isfaragalin iyo isnacayb diimeed oo ka dhaxeeya muslinka iyo masiixiga Atobiya degan.
Waxaa kale oo aan meesha ka maqnayn in uu jiro xidhiidh qoysnimo, oo dhexmara dhalinyarada. Xidhiidhka guurka ayaa awal hore aad u yaraa, waxayna bulshada Somalida iyo bulshada masiixiga ahba aad isaga ilaalin jireen is dhexgalka dhinaca guurka.
Sanooyinkan dambase waxaa aad u batay gabdhaha Somalida ah ee ay guursanayeen saraakiisha ciidamada Atobiya. Kaas badankiisa ay keentay cadaadiska iyo nabad galyo darada haysata shacabka guurka ayeyna gabdhuhu badbaado moodeen, si kolka la xidho qof ka mid ah qoyska gabadha uu sarkaalka gabadha qabaa u siidaayo.
U dhawaanshaha saraarkisha ciidamadu, dadka degaanka oo dhan way saamaysay oo kuligood sharaftooda iyo nabadgaliyadoodu waxay ku xidhan tahay xidhiidhka ay la leeyihiin saraakiisha ciidamada ee jooga degaanka Somalida.
Arintaa gurka ay cabsidu keentay maanta wuxuu noqday mid caadi ah, meesha awal hore la isku ceebin jiray. Waxaana soo kordhay waxyaabo cusub oo dhaqanka iyo diintaba lid ku ah sida; in gabdhaha quruxda badan lagu marti qaado in ay la ciyaaraan masuuliyiinta Atoobiya [dhaanto night clubs].
Dhalinyarada masiixiga ah ee dhigata Jaamacada Jijiga, waxay isku xidhaan qoysayska danyarta Somalida iyo Kaniisada, waxaana laga caawiyaa qoysaskaas dhinaca nolosha. Waxaad arkaysaa maalmaha qaarkood dad Somali ah oo kala soo baxay Kaniisada kiishah raashin qaydhiin ah iyo dhar huudhaydh ah. Caawimaado waa wax caadi ah oo u dhaxeeya aadamiga diinta uu doono ha haystee, laakiin in ruux muslin ah oo dhulkiisa jooga Kaniisad lagu quudiyo sax ma ah.
Xidhiidhka wada shayqayn ee ka dhexeeya Jaamacada Jijiga iyo Kaniisada Jijiga, wuu ka qoto dheer yahay fulinta hawlaha lagu oga yahay labadan hayadood. Waxayna labadoodbu si dadban uga qayb qaadanayaan duufsashada dhalinyarada muslimiinta ah, ee aan qabin wacyi galin wanaagsan oo ay ka helaan warbaahinta degaanka iyo culimada diinta. Meel kasta oo ay gaadho Jaamacada Jijiga, waxaa ku lamaan xubno ka socda Kaniisada Jijiga.
Aduunka meel kasta oo aad tagto ku arkimaysid Muslin Masiixi qaadanaya, xitaa Yurub oo ogaatay in Islaamka lagu badbaado, waxaa nasiib daro ah in Atobiya ay tahay wadanka kaliya ee ruux Muslin ah uu qaato diinta Msiixiga!
Xasarad Xoogan oo ka Jirta Degaanka Canfarta